Kôrsa - Wikipedia
I Kôrsa na Kôrsika dia nosy iray any amin' ny Ranomasina Mediteranea ary vondrom-bahoaka frantsay manambatra ny fahefàm-paritra sy ny fahefàn-departemanta. Atao hoe Corse izy amin' ny teny frantsay, Corsica amin' ny teny italiana sy amin' ny teny kôrsika.
Sarintany maneho an'i Frantsa ahitana ny nosy Kôrsa (miloko mena).
Sarin-tanin' i Corse
Nosy fahefatra ao amin' ny Ranomasina Mediteranea i Corse izay nifamatotra efa ho efa-jato taona tamin' ny Repoblikan' i Genova talohan' ny fahaleovantena fohy amin' ny maha Fanjakan' i Corse azy nanomboka tamin' ny 15 Aprily 1736 ka hatramin' ny Desambra 1740. Tamin' ny 1755, dia nandray ny lalàm-panorenana demôkratika voalohany teo amin' ny tantara môderna tao amin' ny firenena izy io ary voalohany manome ny zo hifidy ho an' ny vehivavy. Tamin' ny 15 May 1768, dia natolotry ny Repoblikan' i Genova ho an' i Frantsa io nosy io, na dia voafetra ihany aza ny fitanan' i Genova an' ilay nosy hatramin' ny nanambaràna ny fahaleovantenan' ny Repoblika Kôrsika (République Corse, amin' ny teny frantsay, na Ripubblica Corsa amin' ny teny italiana ary Republica Corsa, amin' ny teny kôrsika) tamin' ny taona 1755. Resin' ny tafiky ny Fanjakan' i Frantsa izy io tamin' ny ady natao tao Ponte-Novo, tamin' ny 9 May 1769.
Departemanta tokana i Corse tamin' ny namoronana azy ho departemanta tamin' ny taona 1790, nefa nizara roa tamin' ny taona 1793 tamin' ny fananganana ny departemantan' i Golo sy Liamone. Lasa mahaleo tena amin' ny ampahany indray izy teo ambany fiarovan' ny Britanika nanomboka tamin' ny taona 1794 ka hatramin' ny 1796 tamin' ny fananganana ny Fanjakana Anglô-Kôrsika. Tamin' ny 1796 dia lasan' ny Frantsay tanteraka i Corse, ary nitambatra indray ho departemanta tokana tamin' ny taona 1811, avy eo nizara indray tamin' ny taona 1975 tamin' ny fananganana ny Departemantan' i Haute-Corse sy ny Departementan' i Corse-du-Sud. Ny Faritr' i Corse dia noforonina tamin' ny taona 1982 (amin' ny maha vondrom-bahoaka azy) ary tamin' ny 1991, taorian' ny fanambaràna fitakiana teo an-toerana, dia nahazo ny satan' ny vondrom-paritra manana sata manokana antsoina hoe "Collectivité Territoriale de Corse".
Farany, nanomboka tamin' ny 1 Janoary 2018, ho fampiharana ny lalàna momba ny fikambanan' ny tany vaovaon' ny Repoblika tamin' ny 7 Aogositra 2015 (loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République), i Corse dia lasa vondrom-bahoaka manana sata manokana araka ny andininy faha-72 amin' ny Lalàm-panorenana, isan' ny karazana vondrom-bahoakam-paritra tokan-tena, antsoina hoe "Collectivité de Corse".
I Corse dia misy mponina 350 273 tamin' ny taona 2021 araka ny tombantomban' ny Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), na dia 340 440 aza ny isa ôfisialy farany tamin' ny 1 Janoary 2019. Ity isam-bahoaka ambany ity dia mahatonga ilay nosy ho faritra faran' izay vitsy mponina indrindra ao Frantsa any Eorôpa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kôrsa&oldid=1045398"
Dernière modification le 22 Mey 2022, à 11:12
Voaova farany tamin'ny 22 Mey 2022 amin'ny 11:12 ity pejy ity.